Farmaajo Oo dhir ku beeray Magaalada Addis Ababa!
Sunday June 02, 2019 - 17:47:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaha dowladda Federaalka Soomaaliya aya socdaal kedis ah ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa caasimadda Itoobiya kulan kula qaatay Abiy Axmed oo ah R/wasaaraha Xabashida Itoobiya, sawirro lagu baahiyay barta rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ku leedahay Twitterka ayaa muujinyay Farmaajo iyo R/wasaaraha Itoobiya oo dhir ku beeraya Addi Ababa.
Socdaalka Farmaajo oo ahaa mid kedis ah ayaa la sheegay in uu salka ku hayay amar uga yimid R/wasaaraha Itoobiya oo markale isku dayaya in uu ukaxeeyo dhanka magaalada Nairobin ee dalka Kenya.
War kasoo baxay xafiiska Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimaha geeska Afrika oo ah oraah marwalba ay Itoobiyaanku ku hal qabsadaan marka ay Farmaajo ka saxiixanayaan heshiisyo lagu boobayo kheyraadka Soomaaliya.
Farmaajo ayaa tan iyo markii uu majaraha uqabtay hoggaanka dowladda Federaalka wuxuu lasoo baxay dabadhilifnimo dheeri ah isagoo dhaxda ugalay Uhuru Kenyatta iyo Abiy Axmed oo ku adeeganaya waxaana xusid mudan in dowladaha Kenya iyo Itoobiya ay ihaanaysanayaan DF-ka.
Qarax Khasaara dhaliyay oo ka dhacay Addis Ababa iyo melleteriga Suudaan oo qabsaday deegaano xuduudeed.